အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Carlos Tomko ။ ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ်ပာယျ, ဇာစ်မြစ်, ထိုအမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Carlos Tomko ၏လိုက်ဖက်တဲ့။ အားလုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ။
Carlos Tomko အဓိပ္ပာယ်ကို
နာမကိုအမှီ Carlos Tomko နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော Tomko ၏အဓိပ္ပာယ်ကို၏အကျဉ်းချုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အဓိပ္ပာယ် Carlos ။
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို Carlos ။ ပထမအမည်ကို Carlos ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
Tomko ၏သက္ကရာဇ်အဓိပ္ပာယ်ကို။ အဆိုပါအမညျ Tomko ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
Carlos ၏ compatibility နဲ့ Tomko
အမညျ၏ compatibility Tomko နာမည် Carlos ။
Carlos ပတျသကျ. အလှနျသေးနုအမည်များ။
နောက်ဆုံးအမည် Tomko မြေပုံပြန့်ပွား။
Carlos မျိုးရိုးအမည်နှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်အမည်။
Carlos အခြားအပထမဦးဆုံးအမည်များနှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်။
Tomko အခြားအမျိုးရိုးအမည်နှင့်အတူ Compatibility ကိုစမ်းသပ်။
နာမည်အများစုမှာဘုံနှင့်အဆန်းမျိုးရိုးအမည် Carlos ။
အမညျနှင့်အတူအသုံးအများဆုံးနှင့်ဆန်းအမည်များ Tomko ။
ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ Carlos ။
အခြားဘာသာစကားများ, စာလုံးပေါင်းနှင့်အသံထွက်မျိုးကွဲ, ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏အမျိုးသမီးနှင့်အထီးမျိုးကွဲ Carlos ၌ဤပထမဦးဆုံးနာမည်။
သင်ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ Carlos စီရင်သလဲ?
ဘယ်လိုပထမအမည်ကို Carlos Learn အခြားတိုင်းပြည်တွင်အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပထမအမည်ကိုမှကိုက်ညီ။
Carlos အကောင်းဆုံးနာမကိုအမှီအဓိပ္ပါယ်များ: စေတနာစိတ်နှင့်, အရည်အချင်း, ဖန်တီးမှု, ဖော်ရွေ, ကံကောင်း. ရယူ Carlos နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို.
Tomko အကောင်းဆုံးအမည်သစ်ကိုရသောအဓိပ္ပါယ်များ: ခေတ်သစ်, လေးနက်, ကံကောင်း, စေတနာစိတ်နှင့်, ရက်ရက်ရောရော. ရယူ Tomko အမညျ၏အဓိပ္ပာယ်ကို.
Carlos ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ. Spanish, Portuguese and Catalan form of Charles။ ရယူ Carlos ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ.
Carlos name ကို ပတျသကျ. အလှနျသေးနု: Carlinhos, Carlito, Carlitos. ရယူ Carlos များအတွက်အမည်ဝှက်.
နောက်ဆုံးအမည် Tomko အတွက်အသုံးအများဆုံး ဆလိုဗက်ကီး. ရယူ Tomko အမည်သစ်ကိုရသောပျံ့နှံ့.
ကူးယူမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်ဘယ်လိုပထမအမည်ကိုအသံထွက်ဖို့ Carlos: KAHR-los (စပိန်အတွက်). Carlos စီရင်ဖို့ကိုဘယ်လို.
Carlos ဘို့ပြောရလျှင်အမည်များကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ: Carl, Carlo, Carol, Carol, Carolus, Charles, Charley, Charlie, Charlot, Chas, Chaz, Chip, Chuck, Kaarle, Kaarlo, Kale, Kalle, Karcsi, Karel, Karl, Karlo, Karol, Karolis, Károly, Séarlas, Siarl, Sjarel. ရယူ Carlos အခြားဘာသာစကားများ.
နာမည်အသုံးအများဆုံးမျိုးရိုးအမည် Carlos: Gonzalez, Jimenez, Da Silva, Gabaldon, Flores, da Silva. ရယူ နာမည်မျိုးရိုးအမည်စာရင်း Carlos.
နောက်ဆုံးအမည်နှင့်အတူအသုံးအများဆုံးအမည်များ Tomko: Bertha, Lawana, Shayne, Kandy, အိုလီဗာ, Olivér. ရယူ Tomko နှင့်အတူသွားသောအမည်များ.
Carlos ၏ compatibility နဲ့ Tomko 80 ဖြစ်ပါသည်. ရယူ Carlos ၏ compatibility နဲ့ Tomko.
Carlos Tomko အလားတူအမည်များနှင့်မျိုးရိုးအမည်
Carlos Tomko Carlinhos Tomko Carlito Tomko Carlitos Tomko Carl Tomko Carlo Tomko Carol Tomko Carol Tomko Carolus Tomko Charles Tomko Charley Tomko Charlie Tomko Charlot Tomko Chas Tomko Chaz Tomko Chip Tomko Chuck Tomko Kaarle Tomko Kaarlo Tomko Kale Tomko Kalle Tomko Karcsi Tomko Karel Tomko Karl Tomko Karlo Tomko Karol Tomko Karolis Tomko Károly Tomko Séarlas Tomko Siarl Tomko Sjarel Tomko